चिकित्सकको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, अस्पताल बाहिरै बिमारीको उपचार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चिकित्सकको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, अस्पताल बाहिरै बिमारीको उपचार
काठमाडौं। ६९ वर्षीया होइसल तामाङ दाँत निकाल्न वीर अस्पतालमा धाउन थालेको एक हप्ता भयो। बुधबार विहान उनले टिकट काटेर सम्बन्धित डाक्टरकहाँ उपचार गराउन जाँदा डाक्टर थिएनन्।
यसअघि दैनिक आउने जाने मात्र गर्दै आएकी तामाङ आज भने आफ्नो उपचार हुनेमा ढुक्का थिइन्। किनभने एकहप्तादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरको विरोधलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरी टिकट काउन्टर खुलाएको थियो। टिकट काउन्टर खुलेपछि धेरै बिमारीले टिकट पनि काटे। टिकट काटेर डाक्टरकँहा जाँदा कोही पनि सम्बन्धित डाक्टर त्यहाँ थिएनन्।
कर्मचारी समायोजन ऐनको विरोधमा सबै जसो सरकारी डाक्टर आन्दोलनमा छन्। डाक्टर आन्दोलित हुँदा बिमारीको बिचल्ली भएपछि बुधबार विहानै डाक्टरको धर्नामा प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गरेको थियो। प्रहरीको हस्तक्षेपबाट केही डाक्टर घाइतेसमेत भएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सरकारी चिकित्सकको हकमा अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै गत शुक्रबारदेखि सरकारी डाक्टर आन्दोलित छन्।
प्रहरी हस्तक्षेपपछि डाक्टरले अस्पताल बाहिरै बेन्च राखेर बिरामीहरुको उपचार गरिरहेका छन्। विरोधस्वरुप अस्पताल बाहिरै बिमारीको उपचार थालिएको डाक्टरहरुले बताएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ऐनमा डाक्टरलाई स्थायनीय तह तथा प्रदेश अन्तर्गत समायोजनको व्यवस्था छ। सो अनुसार समायोजनमा जाने एमबीबीएस डाक्टरहरु कतिपय ठाउँमा अहेब तथा खरदार अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
सबै तस्बीर : आर्यन धिमाल/ डिसी नेपाल